Barcelona oo xaqiijisay muddada uu dhaawaca kaga maqnaanayo Coutinho | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Barcelona oo xaqiijisay muddada uu dhaawaca kaga maqnaanayo Coutinho
Himilo FM –Philippe Coutinho ayaa ku dhaawacmay kulankii ay Barcelona guusha ka gaartay Getafe Axaddii, waxaana xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil uu qarka u saaran yahay inuu maqnaado muddo 10 maalmood ah.
Kooxda heysata horyaalka LaLiga ee Barcelona oo isku diyaarinaysa finalka Copa del Rey ayaa xaqiijisay in Philippe Coutinho uu maqnaan doono muddo 10 maalmood ah.
Coutinho, oo ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho ciyaartii Champions League ee Liverpool ayaa si fantastik ah u soo bandhigay kubadiisa kulankii Getafe Axaddii ka hor inta uusan dhaawac ku bixin qeybtii labaad.
Barca ayaa haatan soo bandhigtay warar ku saabsan xiddiga reer Brazil, iyagoo ku xaqiijiyay Twitter-ka “waxaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaado muddo 10 maalmood ah kaddib dhaawac muruqa ah.”
Coutinho ayaa laga yaabaa inuu wajaho tartan la xiriira wakhtiga si uu taam ugu noqdo finalka Copa del Rey, kubad sameeyihii hore ee Liverpool ayaa dib ugu soo laaban doona kulanka Valencia 25-ka May.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa wayn doonta Luis Suarez, kaasoo garoomada ka maqnaan doona muddo lix isbuuc ah ka dib markii qaliin looga sameeyay jilibka horraantii Isbuucan.
Previous: 5 dal oo aan laheyn garoomo diyaaradeed!
Next: Tababarihii toddobaad ee Premier League oo la ceyriyay
Koox Ingiriis ah oo heshiis ammaah ku dooneysa Coutinho
Newcastle oo dooneysa laacib katirsan Liverpool
Real Madrid oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro Rabbi Matondo